လွတ်လပ်ရေး ခန်းမ - ဝီကီပီးဒီးယား
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဒေသ** ဥရောပ နှင့် မြောက်အမေရိက
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၇၉ (တတိယအကြိမ်)
လွတ်လပ်ရေးခန်းမ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်း နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတို့ကို ငြင်းခုံဆွေးနွေး၍ စတင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် ၊ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့ ရှိ လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသား သမိုင်းဥယျာဉ်၏ အဓိကနေရာ တစ်ခု အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။
ထိုအဆောက်အဦးသည် ၁၇၅၃ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ခရိုင်၏ ကိုလိုနီခေတ် ဥပဒေရုံး အဖြစ် တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောင်တွင် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ပြည်နယ်ရုံး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ တည်ရှိနေခဲ့သည်မှာ ၁၇၉၉ ခုနှစ် ပြည်နယ်မြို့တော်အား လန်ကန်စတာမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့သည့် အချိန် အထိ ဖြစ်သည်။ ၁၇၇၅ မှ ၁၇၈၃ ခုနှစ် အထိ ဒုတိယမြောက် ကွန်တီနန်တယ် ကွန်ဂရက် အတွက် အဓိက အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး ၁၇၈၇ တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကျင်းပရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၁၅ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သော ညီလာခံတွင် ယခင် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဝီလျံ ဟောင်းဝဒ် တာ့ဖ် မှ ဦးစီးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မည့် အသင်းဖွဲ့စည်းရန် ကြေညာခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီး ဖြစ်လာခဲ့ကာ နောင်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအဆောက်အဦးသည် လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသား သမိုင်းဥယျာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေခံ နေရာ တစ်ခုအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည်။
↑ Independence Hall Archived5February 2017 at the Wayback Machine. (at "Independence Hall's History"). World Heritage Sites official webpage. World Heritage Committee. Retrieved 2010-03-16.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လွတ်လပ်ရေး_ခန်းမ&oldid=734515" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။